NDI AWỤSA ETOOLA ORTOM MAKA ỊBỊA TI HA AKA N’OBI – hoo!haa!!
NDI AWỤSA ETOOLA ORTOM MAKA ỊBỊA TI HA AKA N’OBI
Eze ndi Awụsa bi na Makọdị bụ Alaaji Bello Sallau Abdurrahman etoola aka na-achị steeti Benue bụ Samuel Ortom maka nnleta iti aka n’obi ọbiara leta ha maka nwakpo ọgụ abiara wakpo ha n’izu gara aga.
Mgbe Alaaji Abdurrahman na ndi nta akụkọ na-akparịta ụbụbọ, ka ọ yọrọ aka ahụ na-achị steeti benue, ka ọ gbaa mbọ niile o nwere ike ihụ na-egbochiri ụdi ihea ime kwa ha ọzọ.
N’okwu ya, Alaaji Abdulrrahman sịrị na ha kelere onye ọchịchị ahụ maka aka o biara tie ha n’obi ma kagbukwa ụdị ajọ akparama agwa akpasoro ha. Ọ sịrị na ha na-ayọkwa ka yabụ onye ọchịchị jisi ike mejuputa nkwa o kwere maka nchekwa ndụ na akụ n’ụba ndi Awụsa bi na Makọdị.
Onye ndua yọkwara ka yabụ aka na-achị steeti ahụ gbatara ezi n’ụlọ egburu ndi ha n’ime ọgbaghara ahụ nakwa ndi ahia emebiri ngwa ahia ha mkpu enyem aka. Ọ yọkwara maka ịrụkwa ọdụ ahia ha nakwa ụlọ ekpere ha abụọ agbara ọkụ n’oge tigbue zọgbue ahụ.
Alaaji Abdulrrahaman sịrị na ha bụ ndi Awụsa bi na Benue were onwe ha dịka ndi Benue, ma kwukwa na ha na ndi ha bigasị na ogbe ha na-ebi n’udo rue mgbe ndi amakekwu jiri iwe nwa ebule gbue ha bụ nwa mkpi.
Ọ kpọkuru gọọmenti steeti Benue ka ọ ghara ikwe ka ndi obi tara mmiri mebie ọdị mma dịbu na etiti ndi Awụsa nakwa agbụrụ ndi ọzọ bi na steeti Benue.
Alaaji Abdulrrahaman sịrị na egburu ndi Awụsa mmadụ asatọ n’ime tigbue zọgbue ahụ, ọ sịkwara na ana-achọ mmadụ iri na otu achọ ebe ihe karịrị mmadụ iri abụọ nwetere mmerụ ahụ. N’okwu ya agbakwara ọtụtụ ụlọ ahia ọkụ site na nwakpo mmegwara ahụ ndi ntorọbia ana enyo enyo dịka ndi Tivi wakporo ha bụ ndi Awụsa bi na Makọdị.
Alaaji Abdulrrahaman gosiputara ngbagwoju anya ya, ka esi wakpo ha bụ ndi Awụsa ọgụ mmegwaa ebe ọbụ na ha abụghị ndị nchị ehi Fulani ekwuru na ha gburu ndi mmadụ na-akụkụ ụfọdụ dị na steeti Benue.
Previous Post: MADỤ
Next Post: ONYE NTỌRỊ MMADỤ BỤ EVANS KPỌRỌ EKWO NKỤ…